Kuma ayuu ahaa Sarkaalkii Al-Shabaab ee lagu dilay duqeyntii todobaadkii hore ? - Jowhar Somali Leader
Home Somali Kuma ayuu ahaa Sarkaalkii Al-Shabaab ee lagu dilay duqeyntii todobaadkii hore ?
Kuma ayuu ahaa Sarkaalkii Al-Shabaab ee lagu dilay duqeyntii todobaadkii hore ?
Iyadoo shalay Taliska Ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ay shaaciyeen in duqeyn ay ka fuliyeen Gobolka Baay 2-dii bishii April lagu dilay Sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab, kana mid ahaa aas aasayaasha Ururka ayaa waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan Hoggaaminayahaas sare iyo xilalka Al-Shabaab uu ka hayay.
Sarkaal ka tirsan Maamulka Koofur Galbeed ayaa u xaqiijiyay VOA in duqeyntii cirka ee 2-dii April lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Yuusuf Jiis, oo ah Hoggaamiye sare oo xilli dheer Al-Shabaab ka tirsanaa.
Weerar cirka ah ee Mareykanka fuliyay ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka Bush Madina ee Gobolka Baay oo qiyaastii 55 kiiloomitir bari ka xigta magaalada Diinsoor, ay nawaaxigeeda ka taliyaan Al-shabaab.
Yuusuf Jiis magaciisa dhabta ah waa Yuusuf Nuur Sheekh Xasan wuxuu ahaa sarkaalkii Al-Shabaab u qaabilsanaa la macaamilka hay’adaha gargaarka. Waxaa lagu eedeeyay hoggaaminta weeraro Al-Shabaab ku qaaday xarumaha hey’adaha sama falka iyo bililaqadii loo geystay xarumaha hey’adaha sanadkii 2009.
Saraakiisha Ammaanka ayaa aaminsan in Yuusuf Jiis uu ka soo shaqeeyay qeybo badan sida Ciidamada loo yaqaano Xisbada ee u shaqeysa sida Booliska, sidoo kale waxaa dhowaan lagu daray Golaha Shuurada Al-Shabaab.
Yuusuf Jiis wuxuu adeegsan jiraymagacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Bashar, Yusuf Jeeri iyo Macalim Sahal, sida ay sheegeen saraakiisha amniga Soomaaliya.
Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntii dhacday 2-dii bishii April lagu dilay illaa saddex dagaalyahan Al-Shabaab.
Saraakiisha Amniga Soomaaliya ayaa caddeeyay in dagaalyahanka labaad ee lagu dilay duqeyntaas uu ahaa Yoonis Sheekh Dahir oo ahaa howlwadeen ka tirsab garabka Sirdoonka Al-Shabaab qofka 3aad wuxuu xubin ka ahaa garabka amniyaadka Al-Shabaab, balse lama aqoonsan.
Xubnahan lagu dilay duqeynta ayaa la sheegay inay saarnaayeen hal gaari, waana sababta Saraakiisha Gobolka ula yaaban yihiin sida xubnahan sarsare ay hal baabuur isla saarnaayeen, iyadoo ay jireen duqeymaha Mareykanka.
Guddiyada Joogtada oo go’aamiyay xilliga uu furmayo Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka
C/raxmaan C/shakuur “Maalmahan Villa Somalia waxaa ka socda kulamo lagu doonayo muddo kororsi”
Wasiir ka tirsan Maamulka Puntland oo Muqdisho ugu geeriyooday Coronavirus